** ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Somchai ရာထူး မှ ထုတ်ပယ်ခံရ **
People's Alliance For Democracy (PAD) များသိမ်းပိုက်ထားသော လေယာဉ်ကွင်းများ နှင့် ၀န်ကြီးရုံးများကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နံနက်ထိုင်းစံတော်ချိန် ၁၀ နာရီဝန်းကျင်တွင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ PAD ၏ မလိုလားအပ်သော ၀န်ကြီးချုပ် Somchai ကိုလည်း ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး (၅) နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး မလုပ်ရန် နှင့် သူ၏ ပါတီကိုလည်း တပါတည်း ဖျက်သိမ်းရန် ချမှတ်လိုက်သည်။
Posted by ubeethuree at 6:56 PM0comments Links to this post
ကရင်နီအမှတ် (၁) စခန်းမှာ UNHCR လူစာရင်းစစ်ဆေးနေ
ယမန်နေ့က ကရင်နီအမှတ် (၁) ဒုက္ခသည်စခန်းကို တာဝန်ရှိသူ UNHCR နှင့် ဒေသအာဏာ ပိုင်များတို့ပူး ပေါင်းပြီး တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း လူအမည်စာရင်းကို စတင်စစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းကြားသိရပါ သည်။ အဆိုပါ လူစာရင်းစစ်ဆေးမှုကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ သတင်းများစုံစမ်းမေး မြန်းကြည့်ရာမှာ စစ်ဆေးခံ အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးက “ အဓိက စစ်ဆေးတာကတော့ မိသားစုထဲမှာ လူစုံမစုံ စစ်ဆေးတယ်၊ ပြီးတော့ UN ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကို အကယ်၍ အိမ်မှာမရှိ စခန်းထဲမှာလည်း မရှိဘူးဆိုရင် UN ကဒ်ကို ရုတ်သိမ်းတယ်. ရိတ်ခံလည်းမပေးတော့ဘူး“ ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါသည်၊ ယခုလို လူစာရင်း စစ်ဆေးရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စခန်းပြင်ပသို့ အလုပ်သွားရှာနေသူ များကို စခန်းထဲသို့ပြန်လာရန်နှင့် လူဦးရေ စာရင်းအတိအကျသိရှိနိုင်ရန် ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း တတိယနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွင့်လိုသူများကို interview ခေါ်ယူနေချိန်လည်းဖြစ်ပြီး၊ စာရင်းကို ရှင်းလိုသည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်နိုင် ကြောင်း စခန်းပြည်သူများက ဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါသည်၊၊…
Posted by ubeethuree at 2:36 AM0comments Links to this post
အပစ်ခတ်ရပ် နဂါးအဖွဲ့ လက်နက်များ သိမ်ဆည်းခံရ
ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီမှ ခွဲထွက်သွားသည့် ကရင်နီအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဖွဲ့ KNDA (နဂါးအဖွဲ့)ကို မြန်မာစစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သည့် လွိုင်ကော် ဒကစအဖွဲ့မှ လက်နက်ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး ၃ လခန့် ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု သတင်းများရရှိပါသည်။
လူဦးရေ ၆၀ ခန့်ရှိသည့် ကရင်နီအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဖွဲ့ KNDA (နဂါး)၏ လက်နက်ခဲယမ်းများကို ရပခတိုင်းမှူး၏ ညွန်ကြားချက်အရ လွိုင်ကော်ဒကစမှူး မျိုးဝင်းမှ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် သိမ်းဆည်းလိုက်ပါသည်။
လက်နက်ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရသည့် နဂါးအဖွဲ့တွင် Army (စစ်တပ်)လှိုင်း နှင့် ပါတီလှိုင်းရှိပြီး ယခုလက်နက်များ သိမ်း ဆည်းခံလိုက်ရသည်မှာ Army လှိုင်းဖြစ် ပြီး ပါတီလှိုင်းကိုတော့ ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိသေးပေး။ သို့သော်လည်း လူဦးရေးနည်းသည့် အပြင် ဦးဆောင်သူမှာလဲ တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သည့် အတွက် ပါတီလှိုင်းပါအလို အလျောက်ပျက်ပြယ်သွားနိုင်သည်ဟု ကရင်နီလူမှု ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပင်မ ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ ခူဒယ်နီယာယ်က ဆိုပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရများသည် ၎င်းတို့၏ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်အတိုင်း ၂၀၁၀ရွေးကောက် ပွဲဝင်နိင်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို တရားဝင်ပါတီ အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ရန် ဖိအားများပေးခြင်း၊ လက်နက်များသိမ်းဆည်းခြင်းများ ပြုလုပ် နေပါသည်။ပြီးခဲ့သည့်သဂုတ်လ ၄ရက်နေ့တွင်လည်း ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်စုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အား စစ်အစိုးရက လက်နက်များသိမ်းဆည်းလိုက်ပါသည်။
Posted by ubeethuree at 5:54 AM0comments Links to this post
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကရင်နီဒုက္ခသည် အမှတ်(၁) စခန်းမှ ကရင်နီ လူမျိုးများသည် ရှေးသမိုင်း အစဉ်အလာအရ ကရင်နီ မြေ ပေါ်သို့ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ခဲ့သူ ယွန်းလူ မျိုးတို့အား အောင်နိုင်ခြင်းနှင့် သူရဲကောင်း ဘိုးဘွားများကို ဂုဏ်ပြုခြင်း အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် အဲဒူပေါ်မီ (ခေါ်) ဒီးကူပွဲတော်ကို ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
Posted by ubeethuree at 3:02 AM0comments Links to this post
Karenni Mastyr's Day
On September 8, 2008 Karenni soldiers were celebrating foraceremony of the 60th anniversary of Karenni Martyr's Day in the Karenni free zone. About 400 of soldier families attended the ceremony and gave respect and prayed for the spirit who gave their blood and lost their life in the fighting. A long the fighting against the SPDC for ages and years, there were over 150 soldiers lost their life and left many of their innocent children and wives. For this memory, women who lost their husbands in the fighting were given byacertificates to symbolize themacongratulation. Karenni army started assistance against the Burmese military's invading Karenni State in 1948.
Posted by ubeethuree at 11:05 PM0comments Links to this post
Karenni Army Day
This is the opening ceremony of the 60th anniversary of Karenni Army Day's holding in the Karenni Arms controlled area on August 9, 2008. During the opening ceremony,achief commander of Karenni armed force was given speeches to the people who attended the 60th anniversary of Karenni Army Day involving many villagers, students, and soldier families. One of Karenni Chief commander's said " REVOLUTION WILL NEVER END and NEVER DISAPPEAR". Approximately, there are about 2,000 people or more were participating in the Army Day.
Posted by ubeethuree at 8:26 PM0comments Links to this post
Let me say good bye...
"Now i would like to say all of my best friends and unkind friends the last words... before i am going to die firstly, i would like to say all of you goodbye .... However, ..even though i dead, you don't need to be happy and don't think "Burma" will be found with freedom and will becomeademocracy country as soon as possible.... anyway, i still have many spirits so they will keep on goingadictatorship hehehe don't be crazy.....let me stop my speeches here....thank you guys.....bye byeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"...........
Posted by ubeethuree at 5:13 AM0comments Links to this post
Despite you show me your loves,
Never talk about feelings.
Never hold your hands
If your love is not true love,
Never say I’ll die for you.
Never look into your eyes.
never think about you.
if u can't feel about me
Never say hi again
Posted by ubeethuree at 4:48 AM0comments Links to this post
** ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Somchai ရာထူး မှ ထုတ်ပယ်ခံရ...